.: Ko Moe's Electronics Notes :.: March 2010
UTM (The Universal Transverse Mercator) Golbal Coordinate system
UTM (The Universal Transverse Mercator) ဆိုတာကတော့ GPS, LASER range finder တွေမှာသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ GPS တွေက လောင်ဂျီကျု၊ လတ္တီကျု၊ ဂြိုလ်တုအရေအတွက်၊ အမြင့် တွေကိုပဲ ပြလေ့ရှိပါတယ်။ LASER range finder တွေအများစုက UTM ကိုပြပါတယ်။ ကွာခြားချက်က Longitude, Latitude က ကမ္ဘာလုံးပေါ်မှာ ဆွဲထားတဲ့အတွက် တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ အကွာအဝေးကို တွက်ချင်ယင် Curvature of World ကိုထဲ့တွက်နေရတယ်။ UTM ကတော့2Dimension ပေါ်မှာ ဆွဲထားတဲ့အတွက် (မြေပုံတွေမှာ သုံးပါတယ်) တွက်ရချက်ရ လွယ်ကူပါတယ် (ကွန်ပါလေးနဲ့ ထောက်လိုက်ရုံပေါ့)။ အောက်မှာက UTM ရဲ့ Co-ordinate system ပုံပါ။
Posted by ကိုမိုး at Monday, March 22, 2010 No comments:
TLC5925 LED Driver
ဒီကောင်လေးက CPU Output port တွေ မလောက်တော့တဲ့အခါမှာ သုံးလေ့ရှိတာပါ။ အဓိကက LED တွေကို မောင်းဖို့အတွက်ဆိုပေမယ့် အခြား Digital I/O တွေကိုပါထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ပြဿနာက Current source ဖြစ်တဲ့အတွက် R-EXT value ကိုသေချာတွက်ပြီးမှ ထဲ့ရတဲ့ကွိုင်ပေါ့။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ I/O တွေရဲ့ behavior (LED, CLK, C-Sel, ..) တွေမတူတဲ့အခါမျိုးမှာ resistant value တွက်ရခက်တဲ့အတွက်ပါ။ သူက 8 bit data ကို 1 bit ခြင်းတွန်းထုတ်ပေးရုံပါပဲ။ အဲဒီတော့ IC ကိုအလုပ်လုပ်စေဖို့ CLK အတွက် 1 pin ၊ SDI အတွက် 1 pin ပဲလိုပါတယ်။ အောက်မှာ Pin diagram နဲ့ Connection ပုံလေးတွေ ပြထားပါတယ်။
Posted by ကိုမိုး at Wednesday, March 10, 2010 No comments:
Labels: General, Hardware, IC, Microcontroller
Winradio (Software define radio receiver)
ဒီကောင်က ခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်စတင်လေ့လာနေဆဲ ပစ္စည်းလေးပါ။ သူက မတူတဲ့ Radio Frequency Band တွေကို Hardware ပြောင်းစရာမလိုပဲနဲ့ ဖမ်းလို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့အားသာချက်က Radio Frequency တွေကို Monitor လုပ်လို့ရတာပါပဲ။ Program routine လေးတွေလည်း ရေးလို့ရတယ်။ တစ်ကယ်တော့ အလုပ်လုပ်ပုံက Spectrum Analyzer နဲ့ အတူတူပါပဲ။ Analyzer က Short range (RFID reader တွေအတွက် ကောင်းတယ်) မှာပဲ သုံးလို့ရပြီးတော့။ ဒီကောင်ကတော့ Long range အတွက်ပါ (RFID reader တွေအတွက်တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါ)။ ကျွန်တော် စမ်းနေတာက G305e Model ပါ။
Radio Frequency band တွေနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ Post မှာ ဇယားလေးနဲ့ ပြထားပါတယ်။
မူရင်း ၀က်ဘ်ဆိုက်ကတော့ - http://www.winradio.com/
Winradio (Receiver Hardware)
Winradio (User Interface)
Posted by ကိုမိုး at Sunday, March 07, 2010 No comments:
Labels: Communication, General, radio communication, Wireless
Radio Frequency Bands တွေပါ။ မေ့သွား၊ ပျောက်သွားမှာ စိုးလို့ တင်ထားလိုက်တာပါ။
Labels: Communication, Game, radio communication, RFID, Wireless
UTM (The Universal Transverse Mercator) Golbal Coo...